· Izindawo zokugeza ezingu-12.5
I-Hacienda Sayulita iyi-New Luxury Ocean View Villa etholakala imizuzu embalwa nje uhamba ngezinyawo ukuya e-Beautiful Beach e-Coveted North Side yase-Sayulita. Uzototoswa Ngabasebenzi Abazimele Bomsebenzi Wasendlini, Umpheki kanye Nensiza Yensiza. I-Hacienda inikezela ngama-6-10 King Guest Suites ane-En Suite Bath. Ziphumulele ku-Stunning Infinity Pool & I-Jacuzzi Yabantu abangu-12 *ishiswe ngo-Dec-April. I-Beach iyimizuzu emi-5 yokuhamba phansi egqumeni kubantu abakhuthele. Inhliziyo Yedolobhana laseSayulita iwuhambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka e-villa.
I-Hacienda ibe Umsebenzi Wothando ekwenzeni iminyaka emi-3 edlule. Ihlinzeka Ngezici Ezikhethekile Eziningi ezihlanganisa iminyango ye-Hacienda yase-Mexican ye-Original ye-100 Ehlukile ku-Guest Suite ngayinye, uphahla lwe-Brick Boveda kuwo wonke amagumbi, ama-Custom Cement Floors kanye nemininingwane ye-Stonework, i-Hydrazzo Salt Water Infinity Pool/I-12 Person Jacuzzi (ishiswe ngo-Dec-April), i-Stucco Izindonga Eziqediwe, Ibha, Igumbi Legeyimu kanye negumbi le-TV, I-Upper Terrace Enokubukwa Okunwetshiwe kwe-Pacific ... ukusho nje okumbalwa. Bheka Inkanyezi eduze Nomlilo ku-Chimenea noma Buka i-Movie Yangaphandle Ngaphansi Kwezinkanyezi.
Itholakala ohlangothini oluseNyakatho ye-Coveted ye-Sayulita, kude ngokwanele nesenzo sokujabulela ukuthula nokuthula, nokho imizuzu eyi-10-15 kuphela. ngena enhliziyweni yeDowntown noma ugibele imizuzu embalwa nje. I-"North Beach" enhle itholakala kumabhulokhi angu-3 ngaphansi kwe-villa (uhambo lwamaminithi angu-5 noma ukuhamba ngomzuzu owodwa) futhi alimatasa kakhulu kunebhishi elimaphakathi nedolobha e-Sayulita. Ukubuka ngeso lezinyoni kolwandle kanye ne-pueblo kunokuthula kangangokuthi uzizwa sengathi ukude emhlabeni kuzo zonke izenzo ezisenkabeni yedolobha. Kuhle ukufinyelela kalula kuyo yonke imisebenzi kanye nolwandle, kodwa futhi ube nendawo yokuhlala ezolile ongabuyela kuyo uma usulungele ukuphumula.
I-Hacienda Sayulita inikeza cishe u-20,000 sq ft. Ngamazinga Akhethekile Wesethulo asekelwe kumagumbi okulala angu-6-10, wonke anamagumbi okugezela angasese (ama-suites amaningi anokubukwa kolwandle).
Izinga elikhulu linikeza ukubukwa okunwebekayo kolwandle kuzo zonke izikhala ezihlanganisa igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela, ikhishi le-gourmet, nendawo yokudlela yangaphandle ene-BBQ eduze kwendawo yokubhukuda. Ichibi elishisayo le-infinity kanye ne-jacuzzi kuhlangana olwandle nasemkhathizwe.
Ngaphansi kwezinga lokuhlala eliyinhloko, unendawo yokuzijabulisa ejabulisayo ehlanganisa igumbi legeyimu, ibha kanye negumbi le-TV. Kukhona futhi "amagumbi okulala ayintsha" ama-2 kuleli zinga (womabili amagumbi okulala anombhede wenkosi ongahlukaniswa ube ngamawele ama-2 uma ucelwa) kanye ne-en suite yokugezela.
Ithala elikhulu elivulekile lokubuka olwandle elisezingeni eliphezulu le-villa linendawo yokuphumula engama-20 ppl. Izihlalo zokuphumula kanye nezambulela nazo ziyatholakala ukuze zigezwe yilanga ethaleni.
- 2 king, en suite bedrooms asezingeni lokungena futhi anikeza ukubukwa okuyingxenye kolwandle. *Imibhede ingahlukaniswa ibe yimibhede emibili uma ucelwa*.
- Ileveli eyodwa phezulu ukusuka ku-main, 6 king, en suite bedrooms (3 suite ibheke olwandle enokubukwa okunwetshiwe kolwandle kanye namathafa angasese, 2 suite anamasimu amancane nokubukwa kwengxenye kolwandle, kanye ne-1 suite enethala elincane nokubukwa kwehlathi).
- Ezingeni eliphansi (izinga elilodwa ngezansi kwegumbi lokuhlala / lokudlela / ikhishi) unebha kanye negumbi lemidlalo. Futhi unamakamelo ama-3 kuleli zinga (amakamelo okulala ama-2 anenkosi engahlukaniswa abe ngamawele ama-2 uma eceliwe kanye nokugeza okuyimfihlo kanti elesithathu yigumbi le-TV/igumbi le-11 eliguquguqukayo (amawele amabili asongwayo) anokugeza oku-en suite.
Izilinganiso Zesethulo zibandakanya Izisebenzi Ezigcwele (Isisebenzi Sasendlini/Umbheki/Umshayeli, Umpheki, Nesevisi Yamaid). Amahora okusebenza ango-9am-7pm ngoMsombuluko-ngoMgqibelo (nekhefu lehora lesidlo sasemini). Umpheki uthengisa igilosa futhi ulungiselela ukudla kwasekuseni, isidlo sakusihlwa sehora lenjabulo kanye nesidlo sakusihlwa uma esicelile. Babuya namarisidi egrosa avela esitolo futhi izihambeli zibuyisela amarisidi ngezindleko. Isitolo segrosa esikhulu esiseduze yiMega etholakala imizuzu engama-20. eningizimu e-Bucerias ngakho-ke sincoma ukuthi uhlele ukudla kwakho kusenesikhathi ukuze ugweme imali yohambo lokuthenga engu-$60 US ohambweni ngalunye olungeziwe oluya e-Bucerias (imali yokugibela itekisi ingu-$30 US uya futhi).
Sicela UQAPHELE ukuthi amanani ethu Asekelwe Ekuhlaleni Okukabili ngekamelo ngalinye aqala ngobuncane obungu-6 BR. Ngokwesibonelo, uma unezivakashi ezingu-10 kuphela kodwa udinga wonke amagumbi okulala ayi-10, sicela uthumele umlayezo ukuze uthole isilinganiso esinembile. Inkundla yamanani ku-Airbnb ayihambisani nezintengo zethu "zekamelo ngalinye ngobusuku". U-10% Isaphulelo Samasonto onke Sisebenza Kuphela Ekuhlaleni kwangoMgqibelo-ngoMgqibelo.
KUBALULEKILE - I-villa iqashwa ngasese eqenjini elilodwa ngesikhathi. Sinikeza ngesakhiwo sezilinganiso esingahambisani okwamanje nenkundla yamanani ye-Airbnb ngakho-ke sicela uthumele isicelo ukuze uthole isilinganiso esinembile. Amanani asuselwa enanini lamagumbi okulala owadingayo (ukuhlala kabili ngekamelo ngalinye) futhi aqala ngamakamelo okulala ayi-6 okungenani. Ungakwazi ukwengeza amagumbi engeziwe okungenani amahora angu-48 NGAPHAMBI kokuhlala kwakho njengoba kudingeka ukuze uthole imali eyengeziwe ngekamelo ngalinye.
Indawo itholakala cishe ngamabhulokhi angu-3 nohhafu ukusuka ogwini.
Amabhulokhi angu-2 okuqala ukusuka ogwini ukuya phansi egqumeni kuwuhambo oluyisicaba. Ibhulokhi yokugcina iyisitebhisi esingu-110 esikhuphukela egqumeni ukuya emnyango ongaphambili we-villa. Kuthatha cishe imizuzu emi-2 ukukhuphuka igquma (imizuzu emi-5 isiyonke ukuhamba) futhi kuwukuzivocavoca okuhle kubantu abakhuthele.
Iphuli kanye ne-jacuzzi inomkhawulo wezinga eliphezulu ongapheli nokuchitheka okuncane phezu konqenqema okungenza abazali bezingane ezincane bangakhululeki. Siyayamukela imindeni kodwa ukugadwa kwabantu abadala kuyadingeka ngaso sonke isikhathi.
I-Sayulita iyi-"Pueblo Magico" Ekhethekile enikeza i-Hip Surf Vibe kanye ne-Creative Energy okwabelwana ngayo ngengxube ye-Eclectic neyamazwe ngamazwe yomphakathi wendawo.
Idizayini ye-Hacienda ihlelwe kahle ukuxhuma izivakashi ne-Ocean ne-Jungle kuzo zonke izindawo zokuhlala. Ihlalisa amaqembu amakhulu endaweni Enhle, Eyimfihlo enikezela ngesevisi "Isitayela Sehhotela Ekabukhazikhazi", Izinsiza kanye Nezinto Zokunethezeka njengamakamelo e-King alinganayo anamabhavu e-En Suite (amaningi anokubukwa kwe-Ocean) endaweni engakholeki enokuthile angakunikeza wonke amalungu umndeni (ukubukwa kolwandle, i-Surf, ibhishi, i-Pool, i-Jacuzzi, igumbi legeyimu/Ibha/i-TV, i-Huge Upper Lounge Terrace, izitolo ze-boutique ezipholile, izindawo zokudlela ezinhle, abantu abajabule ababukele kanye nesiko lokuntweza le-surf jikelele elenza i-Sayulita ibe mnandi kakhulu ukuyivakashela) ! I-Villa iphinde ifake nabasebenzi abagcwele ngamanani ethu (okuyivelakancane e-Sayulita). Abasebenzi bathengisa igilosa futhi balungiselela Ibhulakufesi, Ihora Elijabulisayo kanye Nesidlo sakusihlwa lapho beceliwe usuku ngalunye (iSonto liwusuku lwabo lokuphumula ngaphandle kwalapho kuhlelwe ngenye indlela kusengaphambili ukuze bathole enye imali engu-$350 US). Babuya namarisidi egrosa futhi izivakashi zibuyisela amarisidi ngezindleko njengoba izitolo zabasebenzi. Ukudla okulungiselelwe e-villa kusho ukuthi umndeni wakho ungakhululeka ngempela ngokudlela olwandle, wonge imali futhi akudingeki ubhekane nobunzima bokudla ngaphandle. Ukuba nezisebenzi ezizimele ezizototosa zonke izidingo zakho kuzokhuphulela iholide lakho ezingeni elilandelayo!
Ama-movie namakamelo egeyimu anikeza isikhala esihle ukuze wonke umuntu alenge ngemva kosuku olujabulisayo lokuntweza!
I-villa ingalala ngokukhululeka kwezivakashi ezingama-20 kanye nezivakashi ezingama-22 (ama-2 akhipha imibhede engamawele etholakala egumbini le-TV/igumbi le-11 eliguquguqukayo elinezindawo zokulala ezingamawele ezi-2 kanye nokugeza okuyimfihlo). Amanani asuselwa enanini lamagumbi okulala asetshenzisiwe (ukuhlala abantu ababili) futhi sinenani eliphansi lezindlu zokulala eziyi-8 futhi amanye amagumbi okulala ama-2 engeziwe angabhukwa noma nini ngaphambi kokuhlala kwakho. Inkundla yamanani entengo ye-Airbnb ayihambisani nesakhiwo sethu samanani esintengantengayo ngakho-ke sicela uqaphele ukuthi uma uthi unezivakashi ezingu-6-16, ucashunwa ukuze kusetshenziswe amakamelo okulala angu-8, kodwa akuwona wonke amagumbi ayi-10 (amakamelo angasetshenzisiwe ahlala evaliwe kodwa awaqashiswa. ngokwehlukana). Sicela ucele ikhotheshini/umnikelo okhethekile uma unezivakashi ezingaphezu kuka-16 ezididekile mayelana namanani entengo.
Amahora okusebenza angoMsombuluko-ngoMgqibelo kusukela ngo-9am-7pm. Isevisi edlule ngo-7pm ingu-$250 US eyengeziwe ekhokhwa ngokuqondile kubasebenzi ngesikhathi sesevisi. Inkonzo YangeSonto Namaholide ingeza u-$350 US. Siyabonga ngokuhlonipha amahora abasebenzi ukuze bagoduke ngesikhathi ukuze baphumule futhi baphinde banikezwe amandla ngakusasa!
I-Houseman ihlola izivakashi phakathi kuka-4pm-7pm futhi izoba sendaweni ngoMsombuluko-uMgqibelo kusukela ngo-9am-7pm ukuze inakekele noma yini oyidingayo phakathi nokuhlala kwakho. Abasebenzi abahlali esizeni.
Ngemuva kokuthi Abasebenzi bathathe umhlalaphansi kusihlwa, sine-Night Doorman kusukela ngo-8pm-8am.
I-Houseman ihlola izivakashi phakathi kuka-4pm-7pm futhi izoba sendaweni ngoMsombuluko-uMgqibelo kusukela ngo-9am-7pm ukuze inakekele noma yini oyidingayo phakathi nokuhlala kwakho…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R23962.